လူသတ်မူ – Eleven Media Group
Posted on August 18, 2018 August 19, 2018 by သီဟအောင်
တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးအား လူနှစ်ဦးက ကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ပြီး ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၁၈ ရက်တွင် မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
သြဂုတ် ၁၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီမြို့နယ်နေ ဦး …. (၅၈ နှစ်) သည် နေအိမ်၌ ရှိနေစဉ် တိုက်ကြီးမြို့နယ် ပန်းပင်တန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရာဘာစိုက်ပျိုးခြံ နေ့စားအလုပ်သမားအဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသည့် သားဖြစ်သူ ကိုခင်စိုး (၂၆ နှစ်) မှာ ဓားထိုးခံရသဖြင့် သေဆုံးကြောင်း သတင်းရသဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဦး…. မှာ သားဖြစ်သူ အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရာ သားဖြစ်သူ ကိုခင်စိုးမှာ အဆိုပါတဲ၌ သြဂုတ် ၁၆ ရက်ညပိုင်းတွင် အလုပ်အတူ လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်သည့် ရန်ပိုင်စိုးနှင့် စိုးသူ (၂၅ နှစ်) တို့နှင့်အတူ အရက်အတူ သောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အရက်အတူသောက်ရာမှ ကိုခင်စိုးအား ရန်ပိုင်စိုးနှင့် စိုးသူတို့က ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို နိုင်လွန်ကြိုးဖြင့် တုပ်နှောင်ပြီး လက်နှစ်ဖက်အား အင်္ကျီစဖြင့် နောက်ပြန်ချည်နှောင်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုခင်စိုးမှာ ၀မ်းဗိုက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ သုံးချက်၊ ဆီးခုံထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ လည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ သုံးချက်၊ ၀ဲမျက်ခုံး ပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ အောက်နှုတ်ခမ်းနှင့် မေးစေ့တွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ သုံးချက်၊ ၀ဲပါးပြတ်ရှဒဏ်ရာသုံးချက် ရရှိကာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အရက်အတူ ထိုင်သောက်ရာကနေ စကားများပြီး တစ်ယောက်ကို နှစ်ယောက်က သတ်တာပါ။ သေဆုံးတဲ့ အလောင်းကို တွေ့ရှိချိန်မှာတော့ ခြေထောက်ကို ကြိုးနဲ့ချည်ထားပြီး အင်္ကျီစနဲ့ လက်ကိုလည်း ချည်ထားတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း ဓားစိုက်ဝင်နေတာပါ။ ကျုးလွန်သူ နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပါတယ်” ဟု မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ကျုးလွန်သူနှစ်ဦးအနက် စိုးသူကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ရန်ပိုင်စိုးအား ဖမ်းဆီးရမိရန် ဆောင်ရွက်နေပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား ဥက္ကံနယ်မြေရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
Posted in CrimeTagged လူသတ်မူLeaveaComment on တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် လူနှစ်ဦးက အမျိုးသားတစ်ဦးအား ကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ပြီး ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်မှု ဖြစ်ပွား
မိတ္ထီလာကန်ပတ်လမ်းတွင် ထိုင်နေသော လူငယ်ခြောက်ဦးက လက်ခုပ်တီးခေါ်သည် ဟုဆိုကာ စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး ဓားဖြင့် ထိုးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကာ ကျူးလွန်သူ ဟုယူဆရသူ လူငယ်လေးဦးအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့ အမှတ်(၂) နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
သြဂုတ် ၃ ရက် ည ၉ နာရီကျော်က မိတ္ထီလာမြို့ လျှော်ဖြူကန် ကျေးရွာနေ ဦးဖိုးချို (၅၀ နှစ်) သည် သားဖြစ်သူ ဇော်ဝင်းနိုင် မိတ္ထီလာ ကန်ပတ်လမ်းတွင် ဓားထိုးခံရသဖြင့် ဆေးရုံရောက်နေကြောင်း သိရသဖြင့် လိုက်သွားရာ ဇော်ဝင်းနိုင်မှာ ဆေးရုံတွင် ဓားထိုးဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားသဖြင့် သူငယ်ချင်းများအား မေးမြန်းရာ ဇော်ဝင်းနိုင် (၁၈ နှစ်) တတိယနှစ် (ပထ၀ီ) မိတ္ထီလာ တက္ကသိုလ်သည် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သော သူရကိုကို (၁၈ နှစ်)၊ သီဟဇော် (၁၈ နှစ်) တို့အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းခြောက်ဦး မိတ္ထီလာကန်ပတ်လမ်း ဓမ္မသုခကန်ဦးစေတီ အနီးတွင် ထိုင်နေစဉ် ကိုပိုင်က အရှေ့ဘက်မှလာသော လူငယ်သုံးဦးအား လက်ခုပ်တီးခေါ်လိုက်ရာ လူငယ်သုံးဦးမှာ အနီးရောက်ရှိလာပြီး ဘာလို့လက်ခုပ်တီး ခေါ်တာလဲ ဟုဆိုကာ လူငယ်သုံးဦးအနက် ဓားကိုင်ထားသော လူငယ်က သူရကိုကိုအား ခြေဖြင့်ကန်သဖြင့် သွေးထွက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဇော်ဝင်းနိုင်က လူမှားနေကြောင်း ပြောနေစဉ် ဓားဖြင့်ထိုးသဖြင့် ဇော်ဝင်းနိုင်မှာ ၀ဲဘက်ရင်ဘတ်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ သီဟဇော်တွင် ဘယ်ဘက်ပခုံး ပြတ်ရှဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ၊ ပြင်ပလူနာ) စသည့်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ဇော်ဝင်းနိုင်မှာ ဆေးရုံအရောက်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် ဓားဖြင့်ထိုးသူ အမည်မသိ လူငယ်များအား အရေးယူပေးပါရန် ဦးဖိုးချိုက တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကနဦး စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။
“လူငယ်လေးယောက်တော့ ဖမ်းထားတယ်။ မသင်္ကာဖွယ်ပေါ့လေ။ ရန်ငြိုးရန်စတော့ မရှိလောက်ပါဘူး။ လူငယ်တွေဆိုတော့ လက်ခုပ်တီးတာကို မထီမဲ့မြင့် လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဖြစ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ စစ်နေတုန်းမို့ အတည်ပြုပြောလို့ မရသေးပါဘူး” ဟု မိတ္ထီလာမြို့ အမှတ်(၂) နယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဇော်ဝင်းက သြဂုတ် ၄ ရက် မနက်ပိုင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အမှုအား မိတ္ထီလာမြို့ အမှတ် (၂) နယ်မြေရဲစခန်းက (ပ)အမှတ် ၂၆၉/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged မိတ္ထီလာ, လူသတ်မူLeaveaComment on မိတ္ထီလာကန်ပတ်လမ်းတွင် ထိုင်နေသော လူငယ်များက လက်ခုပ်တီးခေါ်သည် ဟုဆိုကာ ဓားဖြင့်ထိုးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးသေဆုံးပြီး မသင်္ကာဖွယ် လူငယ်လေးဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိ
Posted in CrimeTagged မန္တလေး, လူသတ်မူLeaveaComment on အောင်မြေသာစံမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် လူသတ်မှုမှာ တိုက်ခန်းအရောင်းဝယ်ပြုမည်ဟု ဟန်ဆောင်ကာ လက်ဝတ်လက်စားများ ယူဆောင်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူ သုံးဦးလုံးကို ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on July 26, 2018 by သီဟအောင်၊ မျိုးထက်ပိုင်
သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးကို သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ သုံးဦးအား ကာယကံရှင် မိသားစုဝင်များက အမှုပိတ်သိမ်းပေးခြင်းကြောင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Facebook တွင် ဟာသဗီဒီယိုများကြောင့် နာမည်ကြီးလာသည့် သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးမှာ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက် (နှစ်သစ်ကူးည) တွင် ပါတီပွဲတစ်ခု၌ လူတစ်စုက ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်တွင် ဆေးရုံ၌ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်သူများဖြစ်သည့် သန်းထွဋ်အောင်(ခ)သားကြီး၊ ပြည့်ဖြိုးအောင်(ခ) အောင်လေးနှင့် ကျော်ဇောဟန်(ခ)ကျော်ဇော တို့သုံးဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးခဲ့သည့် အောင်ရဲထွေး၏ မိသားစုဝင်များက ရဲစခန်းတွင် (ပ)၅/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းသို့အမှုဖွင့်ထားရာမှ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်တွင် မိသားစုဝင်များက အမှုရုပ်သိမ်းပေးရန် စာတင်သဖြင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ-၄၉၄(က)ဖြင့် အမှုရုပ်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ချပြီး ဖမ်းဆီးထားသူ သုံးဦးအား ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တရားလိုနဲ့ ကွယ်လွန်သူရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကနေ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေရုံးကို အမှုရုပ်သိမ်းခွင့် လျှောက်တာပါ။ ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခရိုင်ဥပဒေရုံးကနေပြီးတော့ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ အမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုပြီး လျှောက်ထားတာ။ လျှောက်ထားချက်တွေကို သုံးသပ်ပြီးမှ ဒီအမှုတွဲမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အခြေအနေ ရုပ်သိမ်းရတဲ့ အခြေအနေတို့ကို သုံးသပ်ပြီးတော့မှ သက်ဆိုင်ရာ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လျှောက်ထားချက်တွေဟာ ဥပဒေနဲ့အညီ လျှောက်ထားချက်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ မှတ်ချက်နဲ့ တင်ပြတာတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ-၄၉၄(က)အရ စွဲဆိုတဲ့ အမှုကို ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတာပါ။ လျှောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတာပါ။ ဥပဒေနဲ့အညီ လျှောက်ထားတာလို့ တရားရုံးက သုံးသပ်ပြီး စွဲချက်မတင်ပဲ ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာပါ။ စွပ်စွဲခံရသူ သုံးဦးလုံး လွှတ်သွားပါပြီ” ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှုမှာ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး (၆) တရားခွင်မှ တရားရုံးအမှု အမှတ် ၃၄/၂၀၁၈ ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် စွဲချက်မတင်ရသေးကြောင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ-၄၉၄(က)နှင့် ပတ်သက်၍ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးဌေးက “တရားလိုဘက်က ရုပ်သိမ်းလွှာတင်လို့ တရားရုံးက လက်ခံရင် အမှုက ပိတ်သိမ်းလို့ရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ဥပဒေရုံးတို့က ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ တရားရုံးကို တင်ရတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေတော့ ရှိကြတယ်။ အမှုမှာ ပီပြင်တဲ့ဟာကို ပိတ်သိမ်းတယ် ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သက်သေတွေကလည်း အမှန်တိုင်း မထွက်နိုင်ဘူး။ သက်သေလည်း မမှန်ကန်ဘူး။ အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ရုပ်သိမ်းလွှာတင်ရတယ်။ တရားရုံးတွေကပေးတဲ့ အစဉ်အလာတွေလည်း ရှိတယ်။ အမှုကြီးတွေကျတော့ ရုပ်သိမ်းလွှာတင်လည်း အမြဲတမ်းပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်တွေက ခိုင်လုံရတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ တင်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူတွေက များတယ်။ ပိုက်ဆံပေးလို့ ရုပ်သိမ်းတယ် ဆိုတာကတော့ ဥပဒေအရ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံပြီး ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီ ဆိုရင်တော့ ရုပ်သိမ်းပေးတာရှိတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဖမ်းဆီးထားသူ သုံးဦးအား ပြန်လွှတ်ပေးသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက “သိတဲ့သူမရှိဘူး။ အပြင်ထွက်သွားတယ်” ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
အမှုနှင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ၎င်းတို့သုံးဦးသည် The One Entertainment ၀င်းအတွင်း ပြုလုပ်သော ပါတီပွဲသို့ ရောက်ရှိစဉ် VVIP စင်ပေါ်၌ ကခုန်နေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ ၎င်းတို့နှင့် ယခင်က ခိုက်ရန်ဖြစ်ဖူးသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ဒေါသဖြင့် စင်ပေါ်သို့တက်၍ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်စဉ် အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ လဲကျသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted in CrimeTagged လူသတ်မူ, အောင်ရဲထွေးLeaveaComment on သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးကို သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ သုံးဦးအား ကာယကံရှင် မိသားစုဝင်များက အမှုပိတ်သိမ်းပေးခြင်းကြောင့် ပြန်လွှတ်
Posted in Crime, HeadlineTagged လူသတ်မူ, သုံးလောင်းပြိုင်LeaveaComment on လှိုင်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို နောက်တိုးတရားခံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တရားရုံးသို့လျှောက်ထား
Posted on July 18, 2018 July 19, 2018 by မင်းသူဝင်းထွဋ်
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပေကုန်းကျေးရွာနေ ဦးတင်လှိုင် အသက် (၈၀) နှစ်နှင့် ၎င်း၏ ဇနီးဒေါ်ရီ အသက် (၈၁) နှစ်တို့မှာ ယင်းတို့၏ နေအိမ်မှာပင် လည်ပင်းပြတ်ရှ ဒဏ်ရာများနှင့် သေဆုံးနေသည် တွေ့ရှိရသောကြောင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ကျွဲဒုံးနယ်မြေရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ ကျွဲဒုံးနယ်မြေရဲစခန်းမှ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အနီးဝန်းကျင် သက်သေများမှတစ်ဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ဦးတင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်ရီတို့ သေဆုံးနေသည်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဦးဝဏ္ဏစိုးအား အခင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသင်္ကာသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ၌ ဦးဝဏ္ဏစိုးဝတ်ဆင်ထားသည့် အင်္ကျီတွင် သွေးစက်အချို့နှင့် ဘယ်ဘက်ဒူးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာမရှိဘဲ သွေးအနည်းငယ်ပေနေသည်ကို တွေ့ရှိခြင်း၊ ဦးဝဏ္ဏစိုး၏ နေအိမ်တွင် တွေ့ရှိရသည့်ပုဆိုးတွင် သွေးစက်များ တွေ့ရှိရခြင်း၊ နေအိမ်ရှိ ဓားတစ်လက်တွင် သွေးစက်များ တွေ့ရှိရခြင်းကြောင့် ဦးဝဏ္ဏစိုးအား ချုပ်ရက်ရမန်ယူ၍ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာတွင် ဦးဝဏ္ဏစိုးက ဦးတင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်ရီတို့အား သတ်ခဲ့သည်ကို ၀န်ခံခဲ့ကြောင်း၊ သတ်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဦးဝဏ္ဏစိုးအား ဦးတင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်ရီတို့က လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်မှ စတင်ကာ အငှားပေးလုပ်ကိုင်စေခဲ့သည့် ကွမ်းခြံအား ပြန်လည်တောင်းခံသောကြောင့် ဦးတင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်ရီတို့နေအိမ်မှာပင် ဒေါ်ရီနှင့် အငြင်းပွားခဲ့ပြီး ဒေါ်ရီအား အသင့်ပါလာသော ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်ရီနှင့် အငြင်းပွားနေချိန်တွင် ဦးတင်လှိုင်မှာ အိပ်ရာမှ နိုးလာသောကြောင့် ဦးတင်လှိုင်ကိုပါ ထပ်မံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စတင်ပြီးတော့ အသတ်ခံရကြောင်းကို သတင်းပေးတဲ့ ဦးဝဏ္ဏစိုးက အသတ်ခံရသူနဲ့ဆို တူတော်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဦးဝဏ္ဏစိုးကို မသင်္ကာလို့ စစ်ဆေးကြည့်တော့ သူ့အ၀တ်အစားတွေမှာ သွေးတွေစွန်းနေတာ။ အရင်က သေဆုံးသူတွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိတာကိုသိရလို့ စစ်ဆေးတော့ ဦးဝဏ္ဏစိုးက သူ့ကိုပေးလုပ်ထားတဲ့ ကွမ်းခြံကိုပြန်တောင်းတာကြောင့် သတ်မိတာပါလို့ ၀န်ခံခဲ့တယ်” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးကြီး ဦးခင်မောင်လတ်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မအူပင်မြို့နယ် ကျွဲဒုံးနယ်မြေရဲစခန်းမှ (ပ) ၃၅/ ၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ကျူးလွန်သူဟု စွပ်စွဲခံရသူ ဦးဝဏ္ဏစိုး အသက် (၄၁)နှစ် ဘ ဦးတင်ရွှေအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မူLeaveaComment on မအူပင်မြို့နယ် ပေကုန်းကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အသက် ၈၀ ကျော် အဘိုးအိုနှင့်အဘွားအို အသတ်ခံရသည့်အမှုတွင် ကျူးလွန်သူဟု ယူဆရသူအား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on July 14, 2018 July 15, 2018 by အောင်မျိုးသန့်၊ သီဟအောင်
သေဆုံးသူ သက်ဝေထူးအား ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်ခဲ့သည့် နေရာအား တွေ့ရစဉ် (ပုံကြီး)နှင့် သေဆုံးသူ သက်ဝေထူး (ပုံသေး) (ဓာတ်ပုံ – အောင်မျိုးသန့်)
သက်ငယ်မုဒိမ်း တရားခံပြေးရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ၏ညီအား ရာအိမ်မှူး အပါအ၀င် ခြောက်ဦးက လူမြင်ကွင်း၌ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဓားဖြင့်ဝိုင်းခုတ်မှု ဒဂုံတောင်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ည ၉ နာရီကျော်ခန့်တွင် ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၁၄၀ ရပ်ကွက် ရတနာ မေတ္တာလမ်းနေ သက်ဝေထူး (၃၆ နှစ်) အား အဆိုပါ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ရာအိမ်မှူးနှင့် ၎င်း၏ဆွေမျိုးများက ဓားဖြင့်ဝိုင်းခုတ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများနှင့် မိသားစုဝင်များက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော် စသိတာက ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းလာတယ်။ မင်းညီပြဿနာ တက်နေပြီ။ လာရှင်းပေးပါဦး။ မင်းညီအန္တရာယ်များတယ်။ ဟိုဘက်က ဓားတွေနဲ့။ ကျွန်တော်လိုက်သွားတော့ သူတို့လမ်းနား ရောက်ခါနီးမှာ ရုတ်ရုတ်အသံတွေ ကြားရတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လုပ်မယ့်လုပ်၊ သေအောင်သာ သတ်လိုက်တော့၊ အပြတ်ရှင်း။ ပြီးရင် အဲဒီကောင်အစ်ကို ဇော်ဇော်အောင်ကိုပါ သွားသတ်မယ်။ နိုင်ငံရေးယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်နဲ့ သူ့အစ်ကိုကိုပါ သွားသတ်မယ်ဆိုပြီး ပြောနေတဲ့ အသံတွေ ကျွန်တော်ကြားရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကောင်ကိုသတ်။ ကရင်အမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တာ သူ့အစ်ကိုဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကရင်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဟောင်းပါ။ မုဒိမ်းမှုနဲ့ ထွက်ပြေးနေတာ။ … သတ်တဲ့ထဲမှာ ရာအိမ်မှူး နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့သူပါတယ်။ ကျန်တာက သူ့အမျိုးတွေပါ။ ခြောက်ယောက်မှာ ငါးယောက်ကို ရဲက ဖမ်းမိထားတယ်။ တစ်ယောက်က အခင်းဖြစ်ပွားပြီး မနက်ကတောင် နာရေးအိမ်ရှေ့မှာ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာတွေ ရှိနေတယ်” ဟု သေဆုံးသူ သက်ဝေထူး၏အစ်ကို ကိုဇော်ဇော်အောင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရပ်ကွက်၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ကရင်(ခ) ရန်နိုင်စိုး (ခ) FRC ဆိုသူမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အလိုရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်း ခံထားရသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးပေ။
ယင်းအမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူအား သတ်ရန် ကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လတ်တလောတွင် ညီဖြစ်သူအား ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ညီဖြစ်သူကို ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်ခဲ့သူများအနက် တစ်ဦးမှာ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကိုဇော်ဇော်အောင်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကျန်ရှိနေသူတစ်ဦးမှာ ရပ်ကွက်အတွင်း သွားလာလျက်ရှိခြင်းကြောင့် မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့် မြို့နယ်မှူးတို့အား ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားသော်လည်း ပထမအကြိမ်တွင်သာ ဖုန်းကိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း၌ ဖုန်းကိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း ၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရသည့် အချိန်တွင် မလုပ်ရန် တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အရက်သေစာ သောက်စားထားကြောင်း သက်ဝေထူး၏ဇနီး ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်မယောက်ျားကမူးပြီး ရာအိမ်မှူး ဦးနိုင်ဝင်းကို မိုက်လား၊ မိုက်ရင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီး စိန်ခေါ်တယ်။ သူက မူးရင်ပေါက်ကရတွေ ပြောတတ်တယ်။ သူ့အကျင့်ကိုလည်း တစ်ရပ်ကွက်လုံး သိတယ်။ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာက ဦးနိုင်ဝင်းတို့က သူ့အိမ်မှာ သူ့အမျိုးတွေနဲ့ အရက်သောက်နေကြတာ။ ကျွန်မယောက်ျားက အဲဒီလိုပြောပြီး အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ပြန်လာတော့ သူ့နောက်ကနေ ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေက ဓားတွေကိုင်ပြီး ပြေးလိုက်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မက ရာအိမ်မှူးဆိုတဲ့ ဦးနိုင်ဝင်းကို တောင်းပန်တယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်မကန်တော့ဆိုလည်း ကန်တော့ပါ့မယ် တောင်းပန်နေရင်းကြားက ကျွန်မယောက်ျားကို အောင်ထက်ပိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ခဲနဲ့လှမ်းပေါက်တယ်။ အဲဒီလိုပေါက်တော့ ကျွန်မက ယောက်ျားကို အထဲကို ဆွဲခေါ်တယ်။ ကျွန်မယောက်ျားကလည်း မူးနေတော့ ဆွဲလို့မရဘူး။ အပြင်ကို ပြန်ထွက်တယ်။ ပြန်ထွက်တော့ သူတို့က ဓားနဲ့ဝိုင်းခုတ်လို့ ကျွန်မယောက်ျားက ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ မှောက်လျက်လေး သေသွားခဲ့တယ်” ဟု သေဆုံးသူ သက်ဝေထူး (၃၆ နှစ်) ၏ဇနီး ဒေါ်သန္တာဝင်းက ဆိုသည်။
မှုခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာမှာ လမ်းကြိုလမ်းကြားဖြစ်ပြီး လမ်းအတွင်းပိုင်းဖြစ်ကာ လူသွားလူလာလည်း နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။
သက်ဝေထူး(၃၆ နှစ်) အား ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်သည့်အချိန်တွင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ အမျိုးသမီး အများစုသာ ရှိနေပြီး ၀ိုင်းဝန်းအော်ဟစ် တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့မှာ “အခြောက်ကြီးက တော်တော် အာကျယ်နေတယ်။ အခြောက်ကြီးဆိုတာ (သေဆုံးသူရဲ့ အစ်ကို) ကို ပြောတယ်။ သူဘယ်လောက် အာဏာရှိလဲဆိုတာ ကြည့်မယ်။ သူ့ညီကို သတ်ပြီးပြီ။ သူ့အစ်ကိုကိုပါ ထပ်သတ်ရမယ်။ လုပ်ကြဆိုပြီး” အော်ဟစ်သွားခဲ့ကြောင်း ဖြစ်စဉ်အား မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်ခံရသဖြင့် သက်ဝေထူးမှာ ဦးခေါင်း၊ ခါးယာဘက်ခြမ်း၊ ယာပေါင်ရင်း၊ နောက်ကျောဝဲဘက်၊ ယာတင်ပါးအပေါ်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရဲမှတ်တမ်းတွင် သေဆုံးသူ သက်ဝေထူးမှာ အရက်မူးပြီး ရမ်းကားနေသည်ကို ရာအိမ်မှူးဖြစ်သူ ဦးနိုင်ဝင်းက ထိန်းသိမ်းတားဆီးစဉ် ဦးနိုင်ဝင်းအား သက်ဝေထူးက ပေါက်တူးဖြင့် လိုက်ခုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ခုတ်သဖြင့် ဦးနိုင်ဝင်းနှင့် မိသားစုက တုတ်၊ ဓားတို့ဖြင့် ပြန်လည်ခုခံရာမှ သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မှုခင်းမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်သတ်ခဲ့သူ ခြောက်ဦးအနက် ငါးဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ညပိုင်း၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒဂုံတောင်ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရာ အမှုဖွင့်ထားသည့် ပုဒ်မနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူ ငါးဦးရှိကြောင်းကိုသာ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး အခြားအချက်များကို မေးမြန်းမည် ဆိုပါက စခန်းမှူး မရှိသေးကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးထားသူများမှာ နိုင်ဝင်း (၄၃ နှစ်)၊ အောင်စိုး (၄၀ နှစ်)၊ သန်းနိုင်ဦး( ၁၉ နှစ်)၊ နေလင်း (၁၆ နှစ်)၊ ချစ်လှ (၆၀ နှစ်) တို့ဖြစ်ပြီး အောင်သက်ပိုင်ဆိုသူ လွတ်မြောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
သန်းနိုင်ဦး (၁၉ နှစ်) နှင့် နေလင်း (၁၆ နှစ်) တို့မှာ နိုင်ဝင်း (၄၃ နှစ်) ၏ သားများဖြစ်ပြီး ချစ်လှ (၆၀ နှစ်) မှာ နိုင်ဝင်းနှင့် ယောက်ဖတော်စပ်ကြောင်း၊ အောင်စိုး (၄၀ နှစ်) မှာ ဦးချစ်လှ၏သားဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်နေသူ အောင်သက်ပိုင်မှာ မြေးဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်အောင်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
သေဆုံးသူ သက်ဝေထူးအား ဓားဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်သတ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ဝင်းဆိုသူမှာ အဆိုပါ ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် ရာအိမ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသည်မှာ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူများနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား ဒဂုံတောင်မြို့မ ရဲစခန်းက (ပ)၁၃၁၈/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, လူသတ်မူLeaveaComment on သက်ငယ်မုဒိမ်း တရားခံပြေး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသူ၏ ညီအား ရာအိမ်မှူး အပါအ၀င် ခြောက်ဦးက လူမြင်ကွင်းတွင် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဓားဖြင့်ဝိုင်းခုတ်သတ်မှု တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွား
Posted in Crime, NewsTagged လူသတ်မူLeaveaComment on သာကေတမြို့နယ် ရှုခင်းသာအတွင်းလမ်း နံဘေးတွင် အသတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး တွေ့ရှိမှုမှ ကျူးလွန်သူကို ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ